Laptọọpụ TECLAST, uru kacha mma maka ego? Ha kwesịrị ya?
Anya gị akụrụngwa dị ọnụ alaNa inye ezigbo mma, arụmọrụ dị mma, yana ihe niile ị ga-atụ anya n'otu n'ime kọmpụta ndị a, laptọọpụ Teclast nwere ike wetara gị ihe niile.
Ụdị China a dị ọnụ ala na-aga nke ọma na ahịa, ndị ahịa na-anwale ya nwere afọ ojuju. Na mgbakwunye, ha gụnyere nkọwa dị ịrịba ama nke ụdị ndị ọzọ dị oke ọnụ na-enweghị, nke bụkwa isi ihe na-akwado ha ...
1 Laptọọpụ TECLAT kacha mma
1.1 NKWUKWU F7S
1.2 NKWUKWU F15S
1.4 NKWUKWU F7S
2 Laptọọpụ TECLAST ọ na-eji ahụigodo Spanish na-abịa?
3 Teclast ọ bụ ezigbo akara laptop?
4 Kedu ihe kpatara na kọmpụta TECLAST ji dị ọnụ ala?
5 Laptọọpụ TECLAST: Echiche m
Laptọọpụ TECLAT kacha mma
E nwere ọtụtụ ụdị nke laptọọpụ ndị China Teclast, n'etiti kacha atụ aro ị nwere ndị a:
Akwụkwọ njem nke Brunel...
Ụdị akwụkwọ ndetu a na-abịa na ihuenyo nke 14.1 sentimita nwere ọmarịcha mma na ịdị nkọ maka 2.5D IPS FullHD panel. Akụkụ ndị a bụ kọmpat na nha nha n'ihe gbasara oriri ike na elu ọrụ. Na mgbakwunye, ọ nwere 3350 Ghz Intel Celeron N2.4 DualCore processor, Intel HD 500 iGPU, 8GB nke RAM, yana ụdị draịva 128GB SSD. Ihe niile agbakwunyere na ahụ igwe dị mma na nke dị fechaa, 7mm gbara ọkpụrụkpụ na 1.5 Kg.
Ọ na-abịa na batrị Li-Ion 38000mWh, maka ogologo ndụ yana njikọta. HDMI, USB 3.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, ohere ịgbasa SSD gị na-enweghị nkesa, oghere kaadị ebe nchekwa, yana Windows 10 etinyeburu ya. Banyere imewe ya, ọ mara mma nke ukwuu, nwere ọdịdị yiri nke Apple Macbook, mana na ọnụ ahịa dị ala.
Laptọọpụ ọzọ a nwere ihuenyo nke 15.6 ”FullHD na IPS n'ọnụ panel na integrated 2.5D mirror. Ihe oyiyi mara mma na nhazi mara mma, ọkụ, dị oke mkpa, yana ihe ọla maka ịdị elu dị elu na ikpo ọkụ. Ngalaba nhazi ya bụ 3350Ghz Intel Celeron N2.4 DualCore nwere Intel HD 500 GPU agbakwunyere na 6GB nke RAM. Mbanye ike ya bụ ụdị SSD nwere 128GB.
Ọ nwere sistemụ arụmọrụ Windows 10 Home 64-bit, oghere kaadị, WiFi na Bluetooth 4.2 Njikọta, USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, miniHDMI, 38000 mWh batrị maka ogologo ndụ na njem. N'ezie, ọ nwere akara mmetụ na ahụ igodo ọnụọgụ.
KFD Ultrabook - chaja...
Ejiri F7Plus nwere a 14.1 anụ ọhịa ahụ, FullHD mkpebi dị elu, nchekwa 2.5D, yana ọdịiche dị egwu, ogo onyonyo na idoanya iji kwalite ahụmịhe nlele. N'ihe gbasara njedebe ya, ọ nwere obere etiti, naanị 8 mm, na ọdịdị ya na-adọrọ mmasị, na ihe ndị dị mma.
Ọ na-ejikọta Intel Celeron N4120 QuadCore processor ruo 2.4 Ghz na Ihe eserese 9th Gen Intel UHD Integrated Graphics. Ọ na-abịa na 8GB nke RAM, 256GB SSD (gbasaa), oghere kaadị ebe nchekwa, batrị ruo ogologo oge ruo awa 8 ekele maka 38000 mWh ya, njikọ WiFi, USB 3.0, kọmpat keyboard, touchpad, na Windows 10 Home. .
Ihe nlere a 14.1 ”FullHD Ọ na-abịakwa nwere ogwe IPS dị elu, slim frame 8mm, nchekwa panel 2.5D, yana tinye ya n'ime ụlọ a haziri nke ọma nke ejiri ihe ọla mee. Na mgbakwunye, ọ dị oke mkpa ma dị oke ọkụ, ọ dị naanị 7mm oke, yabụ ị nwere ike iburu ya ebe ọ bụla ịchọrọ n'enweghị nsogbu.
Gị Windows 10 Sistemụ arụ ọrụ ụlọ ga-enwe ngwaike na-atọ ụtọ iji nye ya akụrụngwa dị mkpa, dị ka ihe nrụpụta ya Intel Apollo Lake Celeron N3450 ruo 2.4 GHz na dual-core, yana Intel HD 500 GPU agbakwunyere, 8 GB nke RAM, yana 128 GB SSD. Ọ nwekwara nkwado kaadị ebe nchekwa, batrị 38000mWh ruo awa 7, WiFi, Bluetooth 4.2, USB 3.0, na HDMI.
Laptọọpụ TECLAST ọ na-eji ahụigodo Spanish na-abịa?
Mba, laptọọpụ TECLAST sitere na China, ha na-ejikwa ọkọlọtọ kiiboodu America, yabụ na ha anaghị agụnye igodo Ñ. Agbanyeghị, nke a abụghị nsogbu, ebe enwere ike ịhazi maapụ ma ọ bụ okirikiri nhọrọ ukwuu maka Spanish site na sistemụ arụmọrụ. Nke a ga-enye gị ohere idowe mkpịsị aka gị n'ọnọdụ ọ bụla ka ịmalite dee ma ị nwere ike pịnye ka ọ na-adị na mbụ, ebe ọ bụ na ahụigodo ga-adị ka Spanish.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị kwesịrị ileba anya igodo n'ihi na ị nweghị ike ide na-eleghị anya, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ị ga-achọ ihe ọzọ. remap ahụigodo, na ha bụ akwụkwọ mmado mara mma nke ha na-ere na Amazon nke dị oke ọnụ ala. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike hazie sistemụ arụmọrụ na asụsụ Spanish wee mado akwụkwọ mmado nke okirikiri nhọrọ ukwuu Spanish na ahụigodo TECLAST ka i wee wepụ nsogbu ahụ.
Banyere otu esi ahazi kiiboodu Spanish na Windows 10, nzọụkwụ isoro bụ:
Gaa na Malite> Ntọala> Oge na asụsụ.
Ozugbo ịbanye, na ihuenyo ọhụrụ, pịa Asụsụ na nhọrọ ndị na-egosi n'akụkụ aka ekpe.
Ugbu a, na ngalaba asụsụ ahọrọ, pịa + Tinye asụsụ masịrị.
Họrọ Spanish (Spain) wee pịa Ọzọ.
Na ihuenyo ọzọ, lelee Tọọ ka asụsụ ngosi wee pịa Wụnye.
Ugbu a, nhọrọ nkesa Spanish ga-apụta na ihuenyo bụ isi, na ngalaba Asụsụ ahọrọ. Ọ bụrụ na enwere nke ọzọ gara aga, pịa akụ elu / ala ka ịkwaga Spanish na ahịrị mbụ wee mee ka ọ bụrụ nke ndabara. Ịnwekwara ike iwepu nkesa asụsụ gara aga ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma hapụ naanị Spanish ...
N'ikpeazụ, ị nwere ike tinye akwụkwọ mmado ugbu a ma ọ bụrụ na ị họrọla ịzụta ha, ebe ọ bụ na igodo ahụ ga-arụ ọrụ ị na-eji. Dịka ọmụmaatụ, igodo dị n'akụkụ L, nke bụ:;, ugbu a ị nwere ike idowe ihe mmado na ya, mgbe ịpịrị ya, ọ ga-abanye na leta Spanish a.
Teclast ọ bụ ezigbo akara laptop?
La mma otu n'ime kọmpụta ndị a dị ịrịba ama, ọbụna karịa ma ọ bụrụ na echere ọnụahịa ya. Mgbe ị na-ahụ imewe nke TECLAST ị na-achọpụta na ọ na-akpachapụ anya, ọbụna na ihe ndị dị ka metal alloys nke ị na-ahụ naanị na ngwá ọrụ dị oke ọnụ sitere na ụdị ndị ọzọ.
Na usoro nke ihuenyo ya, dịkwa mma n'ezie, na ihe ijuanya àgwà. Na mgbakwunye, ị ga-enwe Windows 10 Sistemụ arụ ọrụ ụlọ, yana ihe niile ị na-achọ n'ụdị akụrụngwa a. N'ezie, n'ihe gbasara arụmọrụ, ị nweghị ike ịtụ anya ngwaọrụ nwere oke ike, ebe ọ bụ na ha na-agụnyekarị ngwaike dị obere karịa. Agbanyeghị, ha zuru oke maka ndị na-achọ akụrụngwa dị ọnụ ala isi ojiji (njegharị, akpaaka ụlọ ọrụ, multimedia, maka ụmụ akwụkwọ, ndị mbido na-amalite ịmụ sayensị kọmputa, ...).
Kedu ihe kpatara na kọmpụta TECLAST ji dị ọnụ ala?
Laptọọpụ TECLAST bụ dị ọnụ ala ebe ha na-agbakwunye ọtụtụ ọnọdụ na-enye ohere ibelata ọnụ ahịa na ire akụrụngwa n'ọnụ ahịa ndị a:
A na-arụpụta ha ma gbakọta na China, nke na-anọchite anya nnukwu ego. Otú ọ dị, ọtụtụ ụdị ndị a ma ama na-emekwa otu ihe ahụ ma ha adịghị ọnụ ala. Nke a bụ n'ihi na TECLAST, na mgbakwunye na ndị ọrụ sitere na mba Eshia, nwekwara isi ihe ndị a.
Ma ọ bụkwa na ha anaghị ere ọtụtụ usoro na ụdị dịka ndị nrụpụta ndị ọzọ, ma ọ bụ na-ere nhọrọ na nkesa keyboard maka obodo ọ bụla dị ka nnukwu ụdị na-eme, ma ha na-elekwasị anya na otu ụdị, nke dị ọnụ ala.
Na n'ikpeazụ, ha na-eji ngwaike dị ala karịa, dị ka ọgbọ gara aga ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ dị ala ka ha ghara ime ka ngwá ọrụ ahụ dịkwuo ọnụ. Ị gaghị ahụkwa TECLAST nwere ngwaike dị oke egwu, dịka nwere ikike SSD dị elu, nnukwu ikike RAM, GPU raara onwe ya nye, wdg.
Ha enweghị ọrụ teknụzụ maka mba niile, dị ka ụdị ndị ọzọ, nke pụtakwara na-echekwa ego maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ otu ihe kpatara ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị akara ewu ewu, ị gaghị akwụ ụgwọ maka ika ọ bụla, dịka ọ na-eme na kọmputa ndị ọzọ dị ka Apple, Razer, MSI, Dell, wdg.
Laptọọpụ TECLAST: Echiche m
Eziokwu bụ na TECLAST bụ a ika na-akwado. N'agbanyeghị ọnụ ala ya dị ọnụ ala, ọ nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ maka ụmụ akwụkwọ na-achọ ihe dị oke ọnụ, maka ndị mbido chọrọ ka kọmputa mụta ihe, maka ndị ọrụ na-eji laptọọpụ ha eme ihe n'ụzọ bụ isi, maka ụlọ ọrụ dị obi umeala chọrọ ịzụta nnukwu ego. nke akụrụngwa na ibelata ụgwọ, na ọbụna ndị na-achọ a laptọọpụ ka nnwale na-achọghị imebi ha isi akụrụngwa.
Laptọọpụ ha nwere nnọọ ihe na-akpali imewe, na ihe ndị dị mma na njedebe. Ha na-eju anya n'echiche ahụ mgbe ị na-ahụ ọnụahịa ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ a ma ama nke nwere obere ụlọ dị mma ma ọ bụ ihe plastik.
N'aka nke ọzọ, ha nwere ike inwe ụfọdụ adịghị ike dị ka arụmọrụ, ma ọ bụ ụfọdụ nkọwa nwere ike imeziwanye, dị ka touchpad, keyboard layout, wdg, ma ha Njikọta, àgwà nke. ihuenyo, na ụda, ha nwere ike ikpuchi isi ihe ndị ahụ na-adịghị mma ma na-enye ndị ọrụ ahụmahụ dị mma.
Ebe ọ bụ na e kere ụlọ ọrụ ahụ na 1999, ụlọ ọrụ ahụ jisiri ike bụrụ ntụaka dum na China, na-eduga ahịa ahịa Eshia n'ihe gbasara mmalite na ọnụ ahịa dị ọnụ ala, na-enye onye ọ bụla ohere ịnweta nkà na ụzụ. Na nkenke, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe mara mma na ọnụ ala, wee nweta TECLAST ...
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Laptọọpụ TECLAST